COVID-19 Shaqaalaha Waxsoosaarka Cuntada Barnaamijka Fasaxa Lacagta - Waaxda Ganacsiga Gobolka Washington
Bogga ugu weyn|U adeegida Bulshooyinka|COVID-19 Shaqaalaha Waxsoosaarka Cuntada ee Fasaxa Mushaharka
COVID-19 Shaqaalaha Waxsoosaarka Cuntada ee Fasaxa Mushaharka
Barnaamijkan gobolka Washington wuxuu ubaahanyahay oo ucaawinayaa qaar kamid ah shaqo bixiyaasha wax soo saarka cuntada siinta fasaxa shaqaalaha laga yaabo ama ay leeyihiin baaritaanka COVID-19 ee saxda ah waxaana loola jeedaa in lagu kabayo Sharciga Kajawaabida Kowaad ee Qoysaska Dowlada Dhexe.
13ka Agoosto, 2020, Gudoomiyaha Gobolka Inslee wuxuu soo saaray Baaq 20-67, "Shaqaalaha Soosaarka Cuntada Waxay Bixiyeen Fasax" halka isla mar ahaantaana loo qoondeeyay $ 3 milyan si loogu maalgeliyo barnaamijka.
Baahintu waxay u baahan tahay shaqo-bixiyeyaasha wax soo saarka cuntada qaarkood inay fasax siiyaan shaqaalaha laga yaabo inay qabaan ama leeyihiin baaritaanka COVID-19 ee saxda ah waxaana loola jeedaa in lagu kabo Xeerka Waxkaqabashada Coronavirus-ka Federaalka ee Qoyska (FFCRA).
FFCRA waxay ka dhaaftay loo-shaqeeyayaasha in kabadan 500 oo shaqaale ah. Hadda Washington, loo shaqeeyaha wax soo saarka cuntada ee laga dhaafay FFCRA waxaa lagu dabooli doonaa barnaamijka fasaxa mushahar bixinta ee gobolka.
Inta udhaxeysa Agoosto 18 iyo Nofeembar 13, shaqaalaha ka shaqeeya shirkadaha wax soo saarka cuntada qaarkood waxay xaq u leeyihiin fasax mushahar ah ilaa 80 saacadood oo waqti lumis ah sababo la xiriira COVID-19 oo cudurka lagu ogaanayo ama sugaya.
Loo-shaqeeyayaasha lagu ogeysiiyey shaqaalaha jirran ama astaamaha astaamaha ah waa inay sii wadaan bixinta mushaharka shaqaalahooda ee waqtiga fog iyada oo lagu qiimeynayo $ 10.75 saacaddii. Faa’iidada ugu badan waa $ 860.
Dhamaadka daaqadda, loo shaqeeyeyaashu waxay dalban doonaan dib-u-bixinta kharashaadka fasaxa ee la bixiyo gobolka.
Dadaalkan waxaa loola jeedaa in lagu taageero shaqaalaha si aan loogu qasbin inay kala doortaan amniga dhaqaale iyo caafimaadkooda iyo kan ay la shaqeeyaan iyo bulshada.
Abuuritaanka barnaamijka lacag-celinta, loo shaqeeyeyaashu maahan inay culeyska dhaqaale kaligood iska saaraan. Sidaa darteed waxay awoodaan inay maalgashi bilow ah ku sameeyaan wanaaga shaqaalahooda si looga ilaaliyo dillaacyada waaweyn.
Gobolku wuxuu maal-galinayaa barnaamijyo fara badan oo lagu caawinayo bulshooyinka aan adeegyada qabin, kuwaas oo la silcaya inta lagu jiro cudurkan faafa. Tusaale ahaan, Washington waxay ku dhawaaqday sanduuqa gargaarka shaqaalaha soo-galootiga ah ee soo socda oo gaaraya $ 40 milyan.
Fadlan hubso inaad u soo dirto dalabkaaga Sebtember 18, 2020 Waaxda Ganacsiga. Stacey Voigt aqbali doontid codsiyadaan oo ka shaqeyn doona heshiiska si aad horay ugu socoto.
Shaqaalaha Soo Saarida Cuntada Codsiga Fasaxa Shaqaaleeyaha ee Fasaxa leh (web)
Isqor Lambarka Iibiyaha Gobolka oo dhan (SWV) (web)
Waqtiga arjiga la soo gudbinayo, fadlan hubso inaad soo gudbiso dalabkaaga Lambarka Iibiyaha Gobolka oo dhan, kaas oo hubiya in lacag lagu bixin karo ganacsigaaga.
Tilmaamaha Barnaamijka iyo Foomamka Muhiimka ah
Codsiga Fasaxa Bixinta Mushaharka Shaqaalaha ee Gobolka Washington (PDF) English | Spain
Warbixinta Ku Meel Gaarka Loo-shaqeeyaha # 1 - Markay tahay Sebtember 30, 2020 (Sare)
Warbixinta Ku Meel Gaarka ah ee Loo-shaqeeyaha # 2 - Waa Muddo Oktoobar 30, 2020 (Sare)
Shahaadada Loo-shaqeeyaha Ugu Dambeeya (PDF)
Warbixinta Lacag Bixinta Ugu Dambeysa (Sare)
Foomka A19 - Foojarka Qaybinta (Sare)
Maareeyaha Mashruuca CARES Act
Deeqaha, Qandaraaska, Khabiirka Iibsiga
Xafiiska Horumarinta Dhaqaalaha & Tartan
Kaaliyaha Gaarka ah
Xafiiska Gudoomiyaha Jay Inslee